Vopunduka nekuuchika mombe | Kwayedza
Vopunduka nekuuchika mombe
19 Oct, 2018 - 00:10	 2018-10-18T10:51:56+00:00 2018-10-19T00:05:53+00:00 0 Views
VARIMI vaviri vechidiki vekudunhu reBindura, kuMashonaland Central voita mukurumbira wekuuchika mombe vachikavanisa mhando dzakasiyana.
Anesu Mutizwa (27) naTafadzwa Machiwana (29) vanoita basa iri vari papurazi reBrick Burn.
Vanoti sevarimi vachangobva kuzvikoro zvine chekuita nekupfuiwa kwemombe nezvimwe zvipfuyo, vakaona zvichibatsira kupinda mubasa iri iro parizvino riri kuitwa nevarimi vemombe vashoma.
“Seshamwari neshamwari takabva tose kuhigh school ndokuenda kukoreji nekuUZ (University of Zimbabwe) uko takanoita zvidzidzo zvekupfuiwa kwemombe. Nekudaro tapedza, takangotsvagawo mari ndokutanga kuita basa iri tiri papurazi revabereki kuno kuBindura.
“Iyi yatinoita inonzi artificial insemination, apo tinotsvaga mbeu dzakasiyana kubva kumabhuru emombe emhando dzepamusoro tobaya kumombe hadzi, zvikuru matsiru togadzira mhando dzemombe dzakasimba,” anodaro Mutizwa.
Varimi vaviri ava vanoti vari kukavanisa mbeu yemabhuru emhando dzinosanganisira maBrahman vachisanganisa nematsiru emhando dzeMatuli nemaBohlan.
“Tava nemakore potse matatu tatanga basa iri izvo zvatipundutsa zvikuru nekusimudzawo varimi vazhinji vanopfuya mombe muno mudunhu reMashonaland Central nekune dzimwewo nzvimbo. Tiri kuita basa redu tiri papurazi renhamba 39 kuBindura apo tiri kushanda naVaCollin Mutizwa naScholiwe Mutizwa avo vakatikurudzira kupinda mubasa iri,” anodaro.
Anoti kubva vachitangisa basa ravo, vakauchika mhuru dzemombe dzinodarika 200 idzo dzose pasina yakafa zvinoreva kuti chirongwa chavo chiri kubudirira zvikuru.
Machiwana anoti vane hurongwa hwakakura zvikuru nekuda kwebasa ravo iri.
Anoti vari kuda kutsvaga mhando dzemombe dzakawanda dzemuno muZimbabwe nekunze vodzisanganisa nekuuchika mbeu dzemabhuru akasiyana.
“Sevechidiki tichishandisa hunyanzvi uho takawana kuchikoro tichibatsirwawo nedzimwe nyanzvi, tinoda kutsvaga dzimwe mhando dzemombe dzatinoti dzedu pakuvamba pane kungotevedzera dzakauchikwa nevamwe kare. Tinodawo mbiri iyoyo yekuti tigonzi ndisu takagadzira mhando kana kuti rudzi rwemombe dzedu toga,” anodaro.
Anoenderera mberi achiti, “Tinoshanda nenyanzvi dzepamusoro dzekudzivirira zvirwere zvemombe uyewo nemachengeterwo ezvimwe zvipfuyo zvakasiyana. Nzira yeartificial insemination yakanakira pakuti kana uine tsiru hautsvage bhuru sezvo isu tinongouya kumombe yako tsiru kana mhou tobaya yotobata zamu ipapo,” anodaro.